Maitiro ekuvandudza BIOS, UEFI kana Microcode kubva kuLinux | Linux Vakapindwa muropa
Iwe unoziva maitiro ekuvandudza BIOS kubva kuPC yako? Nekushomeka kwakadai seSpecter, Meltdown, uye ese ayo akasiyana uye mamwe maburi ekuchengetedza akawanikwa mu Hardware, kunyanya mumaCPU, iwe wakaverenga kazhinji kazhinji kuti mazhinji acho anogadziriswa nekuziva maitiro ekugadzirisa iyo BIOS kana UEFI yekomputa yako. ., sezvo chigadziriso kana chigamba chichidikanwa ku microcode inoshandiswa neiyo CPU uye nekudaro inoshandura mashandiro eCUU Control Unit kuti isawanikwe nekutyisidzirwa kwataurwa.
Pamusoro pekushomeka, firmware inogona kuongororwa kune zvimwe zvikonzero zvakawanda, sekushomeka kwechishandiso chehardware, zvikanganiso zvenguva dzose mu software nenzira isingatsanangurike, zvigadziriso zvekuwedzera mamwe mashandiro, nezvimwe. Asi sekutaura kwandaita, mumwedzi yapfuura takanzwa izwi iri kakawanda nekuda kwedambudziko rekuchengetedza iro rakakomba kwazvo mune dzimwe nguva uye raive nechekuita nenzira iyo microprocessor yazvino inobata kumwe kusvetuka, cache, FPU uye kufungidzira kuuraya, kunyangwe mune dzimwe nguva ivo vakaonekwa mune mamwe matunhu ehurongwa senge machipisi kana mamwe macomputer ekuchengetedza akabatanidzwa mune aya mapuratifomu ...
1 Chii chinonzi firmware?
2 Nei kumutsiridza kuchikanganisa iyo CPU?
3 / Maitiro ekuvandudza BIOS / UEFI kubva kuLinux?
3.1 Gadziridza microcode:
4 Njodzi uye matipi usati wagadzirisa iyo BIOS
Chii chinonzi firmware?
Isu tese takanyatso kujekesa nezve izvo Hardware (yepanyama uye inonzwisisika chikamu checomputer, ndokuti, zvemagetsi) uye software (icho chikamu chine musoro chisingabatwe: zvirongwa) zviri. Asi pakati pehardware nesoftware, kana zvirinani, pakati pehardware neiyo kernel yeiyo inoshanda system pane chimwe chinhu: iyo firmware. Firmware iripo mumidziyo yese uye zvikamu zvecomputer, kubva mbeva, iyo optical drive, kune iyo GPU neCPU inoshanda ne microcode.
Asi chii ichocho? Zvakanaka unogona kutaura izvozvo kodhindiko kuti, software uye nekudaro zvine musoro asi panguva ino hazvichinjiki. Inoshanda pane yakaderera nhanho, uye inodzora zvakananga mashandiro emasiketi emagetsi. Iyi firmware, nerubatsiro rwevatungamiriri kana madhiraivha, inobvumidza iyo kana iyo kernel yeanoshanda system inoraira iyo Hardware kuti iite basa, ichaiita. Iyi purogiramu kana kodhi yakanyorwa nemugadziri wechigadzirwa mundangariro inowanzo kupenya, kana imwe mhando yeROM senge EEPROM.
Asi imwe yeiyo firmware inotinakidza zvakanyanya muchinyorwa chino ndiyo BIOS kana UEFI yehurongwa, sezvo iri yakakosha firmware ine mabasa akasiyana siyana panguva yekutanga uye kushanda kwemidziyo. Semuenzaniso, kodhi iyi iri pamusoro pekumisikidza muchina panguva yekutanga, kuona madhiraivha akaomarara kana midhiya panowanikwa sisitimu yekushandisa, kuitisa mamwe macheki anopindira neimwe firmware yezvinhu uye zvigadzirwa, uye ichipa kutonga kune kernel kana system inotanga kutanga ...
Nei kumutsiridza kuchikanganisa iyo CPU?
… Uye izvi zvinei chekuita neCPU, zvakaringana. Inochinja maCCU ane chidimbu chekutongaIyi yuniti inodzora idunhu rinoona nezve kudzora zvimwe zvikamu zveiyo microprocessor kana CPU, sekumisikidza mirawo uye kuita iyo data nema opareta kuenda kumarejista akakodzera uyezve kumisikidza chimwe chinoshanda se ALU kana FPU uye kuti inoita kumwe kushanda pane iyo data zvichienderana nerudzi rwekuraira kuri kuitwa. Iyi mirairo inouya ichibva kuchirongwa kana kodhi software iyo iri kugadziriswa panguva iyoyo, sezvo sezvaunofanira kuziva, zvirongwa zvinoumbwa nhevedzano yemitezo yakateedzana.
Sezvaunogona kufungidzira, ichi chinodzora chinoshanda nenzira iyo iyo inogadzira kana dhizaini akaigadzira. Mune zvimwe zviitiko zvakasarudzika unit yekudzivirira inogona kuve newaya, ndiko kuti, dzinowanzo kumhanyisa asi dzisingachinjiki, nekuti dzinoitwa zvakananga nedunhu chairo. Kune rimwe divi, kune zvekare zvinogadzirisika, ndokuti, mamwe maseketi "akavhurika" anogona kushanda nenzira imwe neimwe zvichiteerana ne microcode kana firmware. Izvi zvinotevera saka kana tikashandura firmware kana microcode tinogona kuita control unit uye nekudaro CPU inogona kushanda zvakasiyana kana kugadzirisa zvimwe zvipembenene kana kusagadzikana.
Ini handidi kuwana hunyanzvi, ndinoda kuti chinyorwa ichi chisvike kuvanhu vakawanda sezvinobvira uye kuti zvese zvandiri kuda kutaura zvinonzwisisika ... Uye mumamashini mazhinji zvinobva zvaitika kuti kodhi iyi inowanzo kuverengerwa mu BIOS kana UEFI , kunyangwe dzimwe nguva iyo microcode inogona kuvandudzwa nekernel panguva yega yega bhutsu, ichichengetedza iyo yekuvandudza kana chigamba mune yakashata memory, ndokuti mu RAM, ichidzivirira kudiwa kwekuchinja iyo BIOS / UEFI.
/ Maitiro ekuvandudza BIOS / UEFI kubva kuLinux?
Kugadziridza BIOS / UEFI kubva kuLinux kana microcode, ngativhurei Maitiro ese ari maviri.
Usati waita yekugadzirisa microcode zvakakosha kuti uve nazvo yakagadziridzwa BIOS / UEFI firmwaresezvo neimwe nzira zvingasashande. Saka tarisa webhusaiti yeako firmwre mupi sePoenix, Mubairo, nezvimwe, kana technical technical webhusaiti yako mamaboard modhi, iyo inowanzo kuve nemapakeji ekugadzirisa aya masisitimu.
Kugadziridza iyo BIOS / UEFI chimwe chinhu chisina kusimba sezvaungaona muchikamu chekupedzisira pane njodzi. Ndokusaka ndichikukurudzira kuti usazviita kana iwe usina chokwadi nezvauri kuita uye kana iwe uchida kugadzirisa kana kuti unochida, asi iwe hauna ruzivo rwakakwana, gara uchibvunza nyanzvi. Uye zvakare, ndinokurudzira kuti utarise mapurojekiti akadai sefwupd, BIOSDisck, Flashrom, nezvimwe, izvo zvishandiso chaizvo zvinotibatsira mukuita izvi.
Imwe yeainyanya kufarira ini ndeye flashrom, ndezve pasuru inotipa chishandiso iyo inobvumidza kuziva, kuverenga, kunyora, kuongorora, uye kudzima ma flash chips. Izvi hazvishandi chete kuvhenekera BIOS / UEFI / CoreBoot, inoshandawo kugadzirisa zvimwe zvekupenga ndangariro zvemakadhi enetiweki, maGPU, nezvimwe, mune mamwe madhijitari ane modifiable firmware. Iyo zvakare inotsigira akati wandei mashandiro masisitimu uye huwandu hwemagiya uye mamodheru emidziyo uye mabhodhi.
Isa iyo flashrom package mukugovera kwako uchishandisa maneja wepakeji iwe uyo waunowanzo shandisa, sezvo chiri chishandiso chiri pakati pezvakachengetedzwa zvezvakakosheswa zvekugovera.
Zvishandiso mudzi kana Sudo, nekuti kuishandisa iwe unoda rombo rakanaka kuti uve chimwe chinhu chisina kusimba.
Ziva iyo firmware yatinoshandisa nekungoita iwo murairo:
Ini ndinokurudzira kuti iwe uite a chengetedza yako yazvino ROM, kana iwe ukaona kuti iyo nyowani yekuvandudza isingashande uye iwe unoda kudzokera kumashure. Zvayo:
Hongu ndinoziva isu tine iyo itsva ROM iyo yatakatora pasi kubva kune RELIABLE sosi, tinogona kushandisa unotevera kuraira kupenya, semuenzaniso kana yedu nyowani yekuvandudza ichinzi uefi-sm.bin:
Kuti uwane rumwe ruzivo bvunza bhuku rekushandisa pamwe murume flashrom.
Kuti uvandudze microcode yeCPU yedu, pasina kubata iyo BIOS / UEFI, ndiko kuti, nekushandurwa kuri nyore muLinux kernel, unogona kusarudza kuisa mapakeji anodikanwa eCPU yako. Semuenzaniso, kana iwe uine AMD CPU yemazuva ano, chinhu chakajairika ndechekuti isa pasuru akadanwa amd64-microcode, uye yeIntel package Intel microcode (kana iwe ukashandisa kuvhuraSUSE, SUSE, RHEL, CentOS, nezvimwe, package yacho inonzi microcode_ctl, uye yeArch intel-ucode kana amd-ucode ...) iyo iwe yaunowana pane anovimbika mawebhusaiti ... (kuti kana iri x86 muchina, kana iri ARM kana zvakasiyana, enda kune webhusaiti yewebhu). Insisto a pesar de parecer un pesado, no descargues este tipo de paquetes desde fuentes desconocidas, es muy importante. Bien, ahora que ya lo tenemos descargado e instalado, puede que el procedimiento sea diferente en cada distribución y que implique activar algunos paquetes o actualizaciones restringidos como los propietarios…
Iine iwo mapakeji akaisirwa uye masystem masisitimu anoratidza mareferenzi akagadziriswa zvakanaka, lchako chekuchengetedza chengetedzo iyo inoisa iyo sisitimu yekushandisa ichave yatove inosanganisira iyi mhando yemicrocode patches kana kumwe kukuvara kwakakomba kwaonekwa, seSpecter, Meltdown, nezvimwe.
Kana iwe uchida, iwe unogona kuwana microcode ruzivo kubva kune yako distro uchishandisa:
Uye nazvo tichazowana microcode ruzivoMuchokwadi, kana isu takaita uyu murairo tisati taisa mapakeji andakambotaura (mushure mekumisikidza inofanirwa kutangazve) uye mushure mezvo, tichaona kuti zvinotiratidza shanduko kana paine iripo yekuvandudza iyo yakaiswa.
Dzimwe nguva AMD, Intel, uye vamwe maCCU vagadziri kana vagadziri vanopa tarballs nemabhinari mababu ekuvandudza microcode kana firmware. Kana iwe wadhanilodha imwe yeaya mapakeji kubva kunzvimbo yakavimbika, tevera rairo dzakapihwa nemugovera kana kubvunza maREADME mafaera.
Njodzi uye matipi usati wagadzirisa iyo BIOS
A firmware kana microcode kugadzirisa yeiyo CPU zvinoreva mune dzakawanda mamiriro ekuvandudza makodhi akavharwa anopiwa neveCUU vanopa isu vatinawo, akavhara kernel madhiraivha (mabhinari emabhurumu), nezvimwe. Ini ndoda kujekesa izvi, nekuti zvirimo uye nzira yekushanda hazvizivikanwe uye zvinoita sezvine musoro kuti iwe unofanirwa kuziva. Mukutaura, kana ukasashandisa yemahara Hardware, iwe hauna imwe sarudzo kunze kwekuvimba iye mugadziri kana dhizaina weako CPU kana mamaboard, asi ehe, usambofa wakatora microcode kana firmware kubva kune zvisiri pamutemo mawebhusaiti, sezvo chiri chinhu chakanyanya kusimba.
Muchokwadi kwete chete hazvina kusimba nekuda kwezvikonzero zvekuchengetedza, sezvo iwe uchigona zvakare kuita kuti chishandiso chisashande zvachose. Kunyangwe iwe ukatora firmware kubva kune inozivikanwa webhusaiti, chimwe chinhu chinogona kukanganisika panguva yekuita, senge kudzimwa kwemagetsi uye izvo zvinosiya iyo yekuisa yekumisikidza uye iyo firmware yakashatiswa zvachose, zvinoreva kuti iwe unogona kunge uchitofunga mukushandisa mari kutenga bhodhi idzva reamai.
Izvi ndizvo zvinozivikanwa neshoko zvidhinha mu Hardware slangndiko kuti, siya Hardware yako kunge chidhinha, isina chero rudzi rwekushandisa. Nezve izvi ini ndoda kukuudza kuti uchenjere uye kuti isu hatisi ivo vane mhosva yezvingaitika kana iwe ukafunga kugadzirisa firmware kana kupenya iyo BIOS / EFI. Asi chenjera, izvi hazviwanzo kureva njodzi, sekukuudza kwandakamboita, hazviite nguva dzose kuti "ubate" iyo BIOS / EFI, kune zvakare kugadziridzwa kuri kungori padanho reOS uye hazvireve izvo njodzi .. .
Ndinovimba ichi chidzidzo chakabatsira, chero mibvunzo kana mazano, usakanganwa kusiya yako inotsanangura...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Maitiro ekuvandudza BIOS, UEFI kana Microcode kubva kuLinux
Ruben Horacio Tsananguro akadaro
Mhoroi mangwanani mangwanani ndanga ndichida kuisa xubuntu 14 pabhuku rangu, uye kurodha pasi mafaera, nekuaisa asi painobvunza kuti itangezve kubva kune usb kiyi, ini ndinopinda bios uye handisi kuwana iyo memory memory mune boot menyu, mumwe munhu anogona kubatsira ini, Kubva ndatotenda zvikuru kwazvo.
Pindura Ruben Horacio Specogna
Chinyorwa ichi chinoratidzika kwandiri, chakanakisa kunyangwe "chine njodzi" kune vedu vedu vanonyanya kurovera uye vanotya.
Ndanga ndichishaya chinyorwa chakanaka kwenguva yakareba chinoita kuti tinzwisise mashandiro emultifunction printer senge yangu (Canon MG 7150) anoshanda pamusoro peWifi.
Ndiine Linux, handisati ndamboita kuti inyatso shanda. Ini ndakakwanisa kuita kuti purinda ibatanidzwe neUSB kuti ishande, asi haina kumboita scanner, kana neWi-Fi kana netambo.
Ndosaka nhasi ndichiunza nyaya uye panguva imwechete ndinokutendai nekutipa zvinyorwa zvemhando dzakadai seino; asi panguva imwe chete, ndinoda mumwe munhu anoziva kuzviita, kuti zviitire nyore kuti isu tamboita yambotaurwa ishande.
Kutenda uye nemutsa zvimiro
Kutanga tarisa muBIOS kana paine iyo MULTIBOOT sarudzo (kwaunofanirwa kuimisa), kana zvisiri, zviripo, kubhuroka ne USB kazhinji kana uchibatidza PC unofanirwa kubatisisa kiyi yeF8 kwekanguva (mu mamwe maPC anowanzo kuve F12) uye ipapo iyo boot menyu inosvetuka inoratidza sarudzo: hard disk, CD, USB. Kana uine UEFI, iyo USB inofanirwa kugadzirwa pamwe neEFI sarudzo kana ikasazviziva.
Maitiro ekushandura mitambo yeLinux kuita flatpak mapakeji
Lubuntu achasarudza iyo Wayland graphic server kune ayo anotevera mavhezheni